အသက် ၂၀အရွယ်မှာ အချစ်နဲ့ ပေါင်းသင်းဆက်ဆံရေးကို ကျွန်တော်တို့ ဘယ်လိုရှု့မြင်ကြသလဲ? - Lifestyle Myanmar
အသက် ၂၀အရွယ်မှာ အချစ်နဲ့ ပေါင်းသင်းဆက်ဆံရေးကို ကျွန်တော်တို့ ဘယ်လိုရှု့မြင်ကြသလဲ?
ကျွန်တော်တို့ဘဝရဲ့ အဆင့်တစ်ခုစီတိုင်းမှာ အချစ်နဲ့ ပေါင်းသင်းဆက်ဆံရေးအပေါ် ကျွန်တော်တို့အမြင်တွေ ဘယ်လိုပြောင်းလဲသွားကြလဲဆိုတာနဲ့ ပတ်သတ်ပြီး ပြောပြပေးချင်ပါတယ်။ ဘယ်ပေါင်းသင်းဆက်ဆံရေးမှာမဆို သင့်ရဲ့လိုအပ်ချက်တွေနဲ့ လိုလားချက်တွေက အသက်အပိုင်းအခြားတစ်ခုစီမှာ ကွဲပြားခြားနားပါတယ်။ ကျွန်တော်တို့ ကြီးပြင်းလာတာနဲ့အမျှ အချစ်ရဲ့အယူအဆကိုလည်း ကွဲပြားစွာ ရှုမြင်လေ့ရှိပါတယ်။ ဒီနေ့မှာတော့ အသက် ၂၀ဝန်းကျင်အရွယ်မှာ ချစ်ခြင်းမေတ္တာအပေါ် ဘယ်လိုရှုမြင်သလဲဆိုတာနဲ့ ပတ်သတ်ပြီး မျှဝေပေးချင်ပါတယ်။
သင့်ရဲ့အသက် ၂၀အရွယ်ဟာ သင်ဘယ်သူဘယ်ဝါဖြစ်ကြောင်း၊ သင်လိုချင်တဲ့အရာတွေ၊ အိမ်မက်တွေ၊ အားသာချက်တွေနဲ့ အားနည်းချက်တွေကို ရှာဖွေတွေ့ရှိတဲ့ အချိန်ဖြစ်ပါတယ်။ ဒီအရွယ်ဟာ စွမ်းအင်အပြည့်ဝဆုံးအရွယ်ဖြစ်ပြီး အရာအားလုံးကို ကြိုးစားချင်ကြတယ်။ စိတ်ပြင်းထန်ကြပါတယ်။ အသက် ၂၀ အရွယ်မှာ ကိုယ့်ပတ်ဝန်းကျင်မှာရှိတဲ့ အရာတွေအပြင် ဘဝအပေါ် ရှုမြင်ပုံကလည်း ပြောင်းလဲသွားပါတယ်။
၁။ ချိန်းတွေ့ဖို့ ဆန္ဒရှိကြပါတယ်
သင်ဟာ အသက် ၂၀ကျော်လာတဲ့အထိ ချိန်းတွေ့တာတွေပြုလုပ်လို့ ၊ ရုပ်ရှင်အတူတူကြည့်ဖို့၊ နာရီပေါင်းများစွာ ဖုန်းပြောဖို့၊ တစ်ယောက်တည်း (သို့) သူငယ်ချင်းတွေနဲ့ အတူအပြင်ထွက်ဖို့ အမြဲတစေ လိုအပ်မှုနှင့် စိတ်အားထက်သန်မှုကို ခံစားရပါတယ်။ သင်ဟာ တစ်ယောက်တည်း မနေချင်တာကြောင့် relationship တစ်ခု ကျရှုံးသွားပြီးဆိုတာနဲ့ တတ်နိုင်သမျှအမြန်ဆုံး နောက်အသစ်တစ်ခုကို စတင်ဖို့ အရမ်းစိတ်အားထက်သန်တတ်ပါတယ်။
၂။ စောစော အိမ်ထောင်ပြုချင်ကြပါတယ်
ဆယ်ကျော်သက်အရွယ်မှာ ထားရှိခဲ့ဖူးတဲ့ ဘဝအပေါ်ရှု့မြင်သော အမြင်အချို့က သင့်ရဲ့အစောပိုင်းအသက် ၂၀အရွယ်မှာ သင်နဲ့အတူရှိနေပါတယ်။ တစ်စုံတစ်ယောက်နဲ့ သင်စဒိတ်ပြီဆိုတာနဲ့ သင့်မှာ အိမ်မက်တွေ စရှိလာပါပြီ။ လက်ထပ်ဖို့ plan တွေချလာပါပြီ။ သင့်အိမ်မက်တွေ အကောင်အထည်ဖော်ဖို့ မိသားစုကို ချက်ချင်းစတင်ချင်လာပါပြီ။
၃။ “အချစ်က လူတွေကို ပြောင်းလဲစေတယ်” ဆိုတာက သင့်ရဲ့ဆောင်ပုဒ်ပါ
ဟုတ်ပါတယ်။ အသက် ၂၀ မှာ ချစ်ခြင်းမေတ္တာက လူတွေကို ပြောင်းလဲစေနိုင်တယ်လို့ သင်ယုံကြည်ပြီး သင့်ပါတနာရဲ့ အားနည်းချက်တွေကို လျစ်လျူရှုနိုင်မှာ ဖြစ်ပါတယ်။ ဘာလို့လဲဆိုတော့ သူတို့ကို အချစ်နဲ့ အချိန်ကာလက ပြောင်းလဲပေးလိမ့်မယ်လို့ သင်ယုံကြည်လို့ပါပဲ။ ဒါ့ကြောင့် သင်ဟာ ကိုယ့်ရဲ့ကိုယ်ရည်ကိုယ်သွေးနဲ့ မကိုက်ညီတဲ့၊ သင့်ကို နှောက်ယှက်နေတဲ့ သင့်ပါတနာဆီက အရာအားလုံးကို ရှိစေတော့လို့ သဘောထားပြီး စတင် သည်းခံတတ်လာပါတယ်။
၄။ သူ/ သူမအတွက် ငါ ပြောင်းလဲလိမ့်မယ်
အသက် ၂၀အရွယ်ရောက်လာတဲ့အခါ တချို့အကြောင်းအရာတွေနဲ့ ပတ်သတ်ပြီး သင်လက်ခံတဲ့အရာ၊ လက်မခံတဲ့အရာ စတဲ့ သင့်ရဲ့ခံယူချက်တွေက မရှင်းလင်းသေးပါဘူး။ ပြီးတော့ ကိုယ့်ကိုယ်ကိုလည်း အဲဒါနဲ့ပတ်သတ်ပြီး လုံးဝမသေချာသေးပါဘူး။ သင်ဟာ ကိုယ့်ရဲ့ relationship တည်မြဲဖို့အတွက် ကိုယ့်ရဲ့ကိုယ်ရည်ကိုယ်သွေး တစ်စိတ်တစ်ပိုင်းကို စွန့်လွှတ်ရရင်တောင် စွန့်လွှတ်အနစ်နာခံဖို့ လိုအပ်တယ်လို့ ယုံကြည်ပါတယ်။
၅။ စိတ်ကို ကျော်ပြီး ကြည့်ပါတယ်
အသက် ၂၀အရွယ် အမျိုးသမီးအများစုက သူတို့ရဲ့ပါတနာကို ဆင်ခြင်တုံတရားနဲ့ မရွေးချယ်တတ်ကြပါဘူး။ သူတို့ဟာ အဲဒီလူက ဘယ်လိုစဉ်းစားသလဲ? သူ့ရဲ့ယုံကြည်ချက်တွေက သူရဲ့အသွင်အပြင်နဲ့ သက်ဆိုင်ရဲ့လား? ဆိုတာမျိုး အများကြီး မတွေးထားပါဘူး။ သင်ဟာ ကိုယ့်ပါတနာက အဲဒီနာမည်ကြီးတွေ၊ စတားတွေလို ပြည့်စုံတဲ့ ပုံမျိုးဖြစ်ဖို့ လိုတယ်လို့ ထင်တတ်ပါတယ်။